Isimo sezulu esiqhwaqhaqhazelayo nesimo somoya sisesikhumbeni esinokuxinezeleka kwangempela. Abaninzi abasetyhini bahlanjululwa ngokukhawulwa kwesikhumba, ukusuka emlonyeni ohlangene. Ubuso bubuhlungu, kubonakale amabala obomvu. Isizathu salolu hlobo singacingwa nje ngeemeko zemozulu, kodwa kunye nokunyamekela okungafanelekanga kobuso.
Kutheni ukuba ubuso bethu bunqabile kunye nemoya buhlungu ?
Uninzi lwabafazi bakholelwa ukuba akunakwenzeka ukugcina ubuhle babo ebusweni busika. Kodwa oku kukukhohlisa. Enyanisweni, ubuso obushushu kunye nomoya bunqabileyo, kwaye ukushisa kweqondo lokushisa (emva kwesitalato ukuya kwigumbi) kuphazamisa izilwanyana ezinqabileyo. Ngaphezu koko, kwiimeko ezinamaqabunga nesimo sezulu, iiseli zesikhumba zobuso bethu zihlaziywa ngokukhawuleza. Oku konke kwaye iba yeso sizathu sokuba ulusu alukwazi ukujamelana nempembelelo yezinto ezingekho phantsi kwangaphandle. Ilahlekelwa ukunyaniseka kwayo, iyancipha, kukho ukucaphuka okungafaniyo. Kodwa ukuba ebusika kuyafaneleka ukujongana nobuso bakho, ngoko umphumo wezinto ezinjalo kwesikhumba zinokuncitshiswa kakhulu.
Indlela yokukhusela ubuso bakho kwimpembelelo yezinto ezingekho phantsi kwangaphandle ebusika
Ukuba usebenzisa i-cremisation creams, kuyacetyiswa ukuba unqatshe iifutha ezimanzi. Inyaniso yinto equlethwe kwi-kremahvoda, ngokukhawuleza ikhuphuka kwaye iqinisa isikhumba. Oku kuncedisa ekuveleni kwemichilo ebusweni.
Kwimozulu yomsindo kunye nemoya, phantsi kwe-makeup, njengesiseko, kufuneka usebenzise amaninzi amaninzi kwaye ukhululekile kwiindlela ezihambelanayo. Ukhekhe olukhethekileyo lwebusika ebusweni lungaqwalaselwa njengendlela ekhethekileyo. Akagcini nje ukukhusela isikhumba sethu emoyeni naseqhweni, kodwa uyayondla ngokufanelekileyo. Kodwa kufuneka uqaphele ukuba ukhetha ukhilimu wasebusika kungcono kunamakhredithi awaziwayo, kuba iziqholo ezingathandabuzekiyo zinokulimaza kuphela izimonyo ezingathandabuzekiyo.
Nangona isikhumba somnxeba kakhulu ngexesha leqabunga kunye nomoya uyazikhusela. Yingakho kufuna ukucoceka okucokisekileyo, njengazinye iintlobo zesikhumba. Ukucetyiswa kwesikhumba somnxeba kukusebenzisa i-foam elula yokuhlamba. Kuzo zonke iintlobo zesikhumba - i-cream ephunga okanye ubisi. Kubalulekile ukwazi ukuba i-agents ezinobundlobongela, izithintelo kunye nezisombululo, ukucoca iiperebhu ebusweni buso akukhuthazwa.
Ukuhlamba ngeqhwa kufuneka kuhlehliswe. Kwimozulu yeqabunga, ulusu lobuso kunye nokunye lufumana unyango olubandayo. Yingakho le nkqubo ingasetyenziselwa ukuba ingalimazi ulusu kongeza.
I-khilimu kufuneka isetyenziswe ebusweni ubuncinane iyure ngaphambi kokuya kubanda. Ngeli xesha, iimveliso zokuzicoca ziyacinywa kwaye ziya kwenza umsebenzi wazo wokukhusela kwiqhwa.
Abasetyhini bayacetyiswa ukuba benze iinkqubo zokuhlanjululwa komzimba xa kungekho mfuneko yokuya kwiqhwa. Iimaski, ukutshiza kunye nokuqhafaza kuhle kakhulu kwenziwe ngokuhlwa, emva kokususa i-make-up. Ukuba emva kokuba le nkqubo ihambe kwimimoya yomoya kunye neqabunga, ingozi yokufumana isithwathwa, yomelele, iyanda.
Kwakhona kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba ukwakhiwa kweziqhumiso ezenzelwe ukukhusela kwiqhwa, akubandakanyi i-glycerin. Ngakolunye uhlangothi, eli candelo leqabunga likhusela ulusu, kodwa ngakwelinye icala lingabangela ubomvu kunye nokubetha, ikakhulukazi kwabasetyhini abanomzimba onobuhlungu.
Kwamanye amabhinqa, isithwathwa sibangela ukuphendulela kwimeko ebusweni. Kubonakala ngendlela yokuvuvukala, ukukhawuleza, iindawo ezibomvu ezinamabala. Ukuzinyango kwimeko apha akukhuthazwa ukujongana - qhagamshelana ne-cosmetologist okanye i-dermatologist. Iingcali ziya kukucebisa amafutha okukhusela okukhethekileyo okanye amayeza anokuncedisa isikhumba sombuso.
Ukukhuculisa, ukukhusela nokukhupha isikhumba sobuso emva kwesithwathwa nomoya, kulungile ukusebenzisa amafutha e-cosmetic, ngakumbi xa ulusu lumile. Ngokugqibeleleyo i-oisten oyile: i-karite, i-avocado, i-jaizozo, njl.
Ezinye iimaski ezikunceda ukubuyisela isikhumba somntu
Ebusika, ungasebenzisa imaski kumaqabunga amaqabunga (agcina amavithamini). Uphelisa ngokugqibeleleyo i-mask yesikhumba, equka: u-honey, oli-olive, i-oatmeal kunye ne-cottage cheese. Isilungiso esilungileyo si-sauerkraut, esithinta isikhumba kwaye siyigcwalise ngamavithamini.
Ebusika, sebenzisa i-mask cream. Iqabunga elitsha (elixutywe phezu kwe-pastry) elixutywe ne-ukhilimu omuncu. Isetyenziswe ebusweni imizuzu engama-20, emva kokuba ihlanjwe ngamanzi afudumeleyo.
I-mask ephuhlileyo yesikhumba esiluhlaza. I-juicy, grated, izaqathe, ezixutywe kunye neeflegi. Umgaqo ufana.
Ukhanyisa ulusu nge-mask curd. I-cottage cheese entsha (iipunipoyi ezi-2) zidibanisa kunye ne-yolk ekhethiweyo yeqanda uze ungeze amaconsi amabini e-hydrogen peroxide. Faka isicelo malunga nemizuzu engama-10 (kungekho) uze uhlambe ngamanzi afudumeleyo.
Ukunyamekela ubuso bakho, bobabini ebusika nasehlobo, sebenzisa ezi ngcebiso. Emva koko, ibhinqa lifanele libe lihle nangaliphi ixesha lonyaka.
Izigulane zabantu abahlengikazi ebusweni ebusika
Indlela yokuphilisa i-acne kunye ne-acne
Ukujonga okutsha kwe-cosmetology
Unonophelo oluninzi lwe-couperose kunye ne-asterisk ye-vascular
I-Turkey fillet ngesiJapan
Ukupheka kunye neengcebiso zokupheka isobho sebhontshisi
Ukhawuleza ukuzithokozisa njani?
Khetha iimpahla zokulala nokuphumla
Ukupheka, ukupheka ekhaya
Iigwangu zentenge nge-cream filling
Indlela yokugxininisa imimandla engumntu?